LokaChantha: ယူချင်ရင် ရနိုင်
အေး .. အေး ... ပစ္စည်းလဲ မကုန်ဘူး။ အလုပ်အကိုင်လဲ မပျက်ဘူး။ သူတကာလဲ မသိဘူးဆိုတော့ ကိုယ်လိုအပ်တဲ့ မှန်းထားချက်တွေဟာ မအောင်မြင်နိုင်စရာ မပြီးစီးနိုင်စရာ မရှိဘူးပေါ့ဗျာ။
သက်သာလိုက်တာ။ ရှေးက အရှင်တွေဟာလဲ အဲသည်လို တောင့်တချက်ပြီးမှုအတွက် ဘုရားရှင်ပွင့်တော်မူတဲ့အခါ ဘုရားရှင်သာသနာတော်ကို တွေ့အောင် ဆည်းပူးတော်မူကြတယ်။
တွေ့ကြသည်နှင့်တပြိုင်နက် ဘုရားပွင့်တော်မူတဲ့အခါနှင့် သိတဲ့အခါမှာ သူတို့လိုချင်တာတွေ အကုန်လုံး ရတာဗျာ။
အခုလဲပဲ ကိုယ်အလိုရှိတဲ့ဟာတွေ ရနိုင်တဲ့ အချိန်အခါ ဘဝပါပဲ။ ယူရုံကလေးပါဗျာ။
ရှေးအရှင်တွေဟာ သည်လိုအချိန်မျိုးနှင့် ကြုံကြိုက်ကြပြီဆိုတော့ စိတ်နှလုံးအလို တောင့်တတဲ့အတိုင်းဟာ အရယူကြတာဗျာ။ အနည်းငယ်မျှသော အချိန်ကိုမှ အချည်းနှီး မဖြုန်းဘူးဗျာ။ အခုလဲ အချိန်ဟာ ဘယ်လိုလိုက်ပါသလဲဆိုရင် အသီးသီးတို့ဟာ ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင် ဘယ်ဗောဓိမဆို အချိန်တိုင်း အချိန်တိုင်းမှာ ရနိုင်တယ်။
ဣရိယာပုတ်မှာလဲ လေးပါးရှိတယ်။ ဘယ်ဣရိယာပုတ်နှင့်မဆို ဝိရိယထူထောင်ပြီးတော့ ယူမယ်ဆိုရင် ရတယ်။ နေရာကကောဗျာ၊ ဘယ်နေရာမဆိုဗျ။ တောထဲမှာ ဖြစ်ဖြစ်၊ မြို့ထဲမှာ ဖြစ်ဖြစ်။ အဲသည်လို ယူရင် ဖြစ်နိုင်တာချည်းပဲ။
ဆရာတော်။ ။ သည်တော့ တစ်ယောက်တည်း ဘုရားဆုံးမတဲ့အတိုင်း ဘုရားအလိုတော်ကျအောင် ဝိရိယထူထောင်ယူရင် မဖြစ်ဘူးလား?
တရားနာခံ။ ။ ဖြစ်ပါတယ်ဘုရား။
ဆရာတော်။ ။ အများကြီးနဲ့ကော။
တရားနာခံ။ ။ အများကြီးနဲ့လဲ ဖြစ်ပါတယ်ဘုရား။
ဆရာတော်။ ။ သူတကာတို့က စကားတွေ ပြောနေရင်ကော ကိုယ့်ဟာကိုယ် ထူထောင်မယ်ဆိုရင် မဖြစ်ဘူးလား?
တရားနာခံ။ ။ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဘုရား။
ဆရာတော်။ ။ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဗျ။ လွယ်လိုက်တာ ဟင်။
တရားနာခံ။ ။ သို့ပေတဲ့ တပည့်တော် သည်နေ့ .. ငွေစာရင်းကလေး လုပ်ကြည့်ပါတယ် ဘုရား။ ငွေစာရင်းကလေး လုပ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ အချက်ကလေးကလဲ တော်တော်များတယ် ဘုရား။ နှစ်ကျပ်ခွဲက တစ်ခု ... ဆယ့်သုံးကျပ်တစ်မတ်က တစ်ခု ... စသဖြင့် အတော်များတော့ ဒါကလေး ပေါင်းနေတုန်း ထိသိကို မလုပ်နိုင်ဘူးဘုရား။ ထိသိကို လုပ်ကြည့်တော့လဲ ပေါင်းတာတွေ မှားလိုက်တာ၊ ပေါင်းလို့ကို မဖြစ်ပါဘူး ဘုရား။ ဒါကြောင့် ငွေစာရင်းကလေးလဲ ပေါင်းလို့ဖြစ်အောင် ထိသိလဲ မလွတ်တဲ့နည်းကလေး သနားပါအုန်း ဘုရား။
ဆရာတော်။ ။ ဒကာကြီး စာရင်းပေါင်းတယ်ဆိုတာက ဒါဟာ ပေါင်းနေကျပဲဗျ။ ဒါကို လေ့ကျင့်ရတာ မဟုတ်ဘူး။ လုပ်နေကျ အလုပ်ပဲ မဟုတ်လား?
တရားနာခံ။ ။ လုပ်နေကျအလုပ်ပေမယ့် စိတ်အင်မတန် စိုက်ရပါတယ်ဘုရား။
ဆရာတော်။ ။ လုပ်နေကျအလုပ်ဆိုတော့ ဝန်မလေးဘူးဗျာ။ အဲသည်လို လုပ်နေကျအလုပ်ကို လုပ်ရင်း ကိုယ်အလိုရှိတဲ့ဟာကို ထားတော့ မဖြစ်ဘူးလားဗျ။
တရားနာခံ။ ။ တပည့်တော်ကတော့ ခြံထဲမှာ မော်တော်ကားတို့ ဘာတို့ မရှိတဲ့နေရာမျိုး ရောက်ရင်တော့ ရပါတယ်ဘုရား။
ဆရာတော်။ ။ ထိုင်နေရင်းကော။
တရားနာခံ။ ။ ရပါတယ်ဘုရား။
ဆရာတော်။ ။ စကားပြောရင်းကော။
တရားနာခံ။ ။ အခုပဲ စကားပြောရင်း လွတ်နေပါတယ်ဘုရား။
ဆရာတော်။ ။ စကားပြောတာနဲ့ ဒကာကြီးက ထားမှ မထားဘဲ။ မထားလို့ လွတ်တာဗျာ။ ထားရင် လွတ်ပါ့မလား။
တရားနာခံ။ ။ ထားတော့ ထားပါတယ်ဘုရား။ ဒါပေမယ့် လွတ်တာက များနေပါတယ်ဘုရား။
ဆရာတော်။ ။ အစတုန်းက ဒကာကြီးဟာ ခုလို ဘယ်အခါမှ မထားတော့ ဘယ်တော့မှ မနေဘူး မဟုတ်လား။
တရားနာခံ။ ။ အရင်တုန်းကတော့ သတိကို မရပါဘူးဘုရား။
ဆရာတော်။ ။ အခုတော့ ဘယ့်နှယ်လဲ။ တစ်နေ့လုံး နေရင်း အခုလို လောဘ ဒေါသ မောဟ ဘယ်လောက်များ စင်ကြယ်သတုန်းဗျ။
တရားနာခံ။ ။ ရှေးတုန်းကတော့ စင်ကြယ်တဲ့အခါရယ်လို့ မရှိပါဘူးဘုရား။
ဆရာတော်။ ။ သည်တော့ ဘုရားဆုံးမတဲ့ အဆုံးအမကို ထားရမယ်ဆိုရင် လိုက်နာပြီး အခုထား - အခုစင်ကြယ်နိုင်တယ် မဟုတ်လား။
တရားနာခံ။ ။ စင်ကြယ်နိုင်ပါတယ်ဘုရား။
ဆရာတော်။ ။ ဒါဖြင့် ဒကာကြီး ရှေးတုန်းကဟာက ထားလျက်သားနဲ့ မစင်ကြယ်တာလား။ မထားလို့ မစင်ကြယ်တာလား။
တရားနာခံ။ ။ ရှေးက မထားလို့ မစင်ကြယ်တာပါဘုရား။
ဆရာတော်။ ။ အခု အဟုတ်ထားလိုက်တော့ အဟုတ်စင်ကြယ်တယ် မဟုတ်လား။
တရားနာခံ။ ။ အဟုတ်ထားပေမယ့် လွတ်လွတ်သွားပါတယ်ဘုရား။
ဆရာတော်။ ။ အဟုတ်ထားတော့ မလွတ်ဘူးဗျ။ လွတ်လွတ်သွားတာဟာ အဟုတ်မထားလို့ဗျ။
တရားနာခံ။ ။ အဟုတ်ထားတယ်ဆိုတာက တခါတခါ စကားပြောရင်း မလွတ်အောင် ဘယ်လို အဟုတ်ထားရမလဲဘုရား။
ဆရာတော်။ ။ ဒကာကြီးတို့များ အဟုတ် အလေးဂရုပြုပြီး ထားရင်း သွားရင်း ဖြစ်တယ်မဟုတ်လား။
တရားနာခံ။ ။ အဟုတ် အလေးဂရုမပြုတတ်အောင် ဖြစ်နေပါတယ်ဘုရား။
ဆရာတော်။ ။ ဒကာကြီးများ ပြုတတ်ပါတယ်ဗျာ။ သည့်ပြင်ဟာ မပြောပါနဲ့။ အဖိုးထိုက်တန်ကြီး မဟုတ်ပါဘူး။ ကဲ ... ဒကာကြီး ဒကာမကြီးများတို့ အသီးသီးကို ဆီပေးမယ် ... ယူလှည့်ကြဆိုရင် ဒကာကြီး ဒကာမကြီးတွေဟာ ထည့်စရာအသီးသီး ယူခဲ့ကြရမယ် မဟုတ်လား။
တရားနာခံ။ ။ ယူခဲ့ကြရမှာပါ ဘုရား။
ဆရာတော်။ ။ အေး ယူခဲ့တော့ ... ပါသလောက် ခွက်တွေကို အကုန်ပြည့်အောင် ထည့်ပေးလိုက်မယ်။ ယူကြမယ် မဟုတ်လား။
တရားနာခံ။ ။ ယူကြမှာပါ ဘုရား။
ဆရာတော်။ ။ အဲသည်လို ယူတဲ့အခါကျတော့ မဖိတ်အောင် ယူကြမှာပဲ မဟုတ်လား။
တရားနာခံ။ ။ မဖိတ်အောင် ယူမှာပါဘုရား။
ဆရာတော်။ ။ သည်တော့ တို့က ပြောရဦးမလား။ ထည့်ပေးလိုက်တာကလေးတွေ မဖိတ်အောင် ယူကြလို့ ပြောရဦးမလား။
တရားနာခံ။ ။ မပြောဘဲနဲ့ မဖိတ်အောင် ယူမှာပါဘုရား။
ဆရာတော်။ ။ သည်တော့ ဘယ်လိုယူမလဲ။ ယူရမှာက လူတွေ အများကြီး။ အလယ်က ယူရမှာ မဟုတ်လား။
တရားနာခံ။ ။ ဟုတ်ပါတယ်ဘုရား။
ဆရာတော်။ ။ သည်တော့ သတိဆောင်ပြီး မဖိတ်အောင် ယူရမယ်မဟုတ်လား။ သည်လိုယူတော့ လူတွေက ဖယ်ပေးကြမှာလား။
တရားနာခံ။ ။ တပည့်တော်က ရှောင်ပြီး သွားရမှာပါဘုရား။
ဆရာတော်။ ။ သည်တော့ လူတွေကိုလဲ ရှောင်ရသေးတယ်။ ဆီကိုလဲ အဟုတ် မဖိတ်စေရအောင် စိတ်ကထားတော့ ဘယ့်နှယ်လဲ။
တရားနာခံ။ ။ အဟုတ် မဖိတ်ပါဘူး ဘုရား။
ဆရာတော်။ ။ ရှောင်တယ်ဆိုတာက ဘယ်လိုလဲ။ ကျော်တန် ကျော်ရမယ်။ ကွေ့တန် ကွေ့ရမယ်။ ကောက်တန် ကောက်ရမယ် မဟုတ်လား။ သည်နေရာမှာ တို့က ပြောရဦးမလား။ ဒီနေရာမှာ ကျော်လိုက်ဦး၊ ဟိုနေရာကျတော့ ကွေ့လိုက်ဦး၊ ဒီနေရာကျတော့ ဒီဘက်ကို ကောက်လိုက်ဦးလို့ ပြောရဦးမလား။
တရားနာခံ။ ။ မပြောရပါဘူး ဘုရား။
ဆရာတော်။ ။ ခြေလှမ်းကကော ပကတိလှမ်းတာထက် တခါတလေကျရင် ခပ်များများ ပိုလှမ်းရတဲ့အခါလဲ မရှိဘူးလား။
တရားနာခံ။ ။ ရှိပါတယ်ဘုရား။
ဆရာတော်။ ။ တိမ်းတတ် ရှောင်တတ်ဆိုတာကလဲ ကိုယ်အခါခပ်သိမ်း လှမ်းနေကျအတိုင်း မဟုတ်ဘဲ နည်းနည်းလှမ်းရတဲ့အခါ ကြဲကြဲလှမ်းရတဲ့အခါကော မရှိဘူးလား။
ဆရာတော်။ ။ ဒါတွေကိုလဲ ပြုပြင်ရမယ် မဟုတ်လား။
တရားနာခံ။ ။ ဒါတွေကိုလဲ အကုန်လုံး လျှောက်ပြုရမှာပါဘုရား။
ဆရာတော်။ ။ သည်တော့ စိတ်က ဘယ်လိုထားရမလဲဆိုတော့ အခုန ထည့်ပေးလိုက်တဲ့ ဆီလဲ မဖိတ်စေရဘူးဆိုတဲ့ စိတ်လဲ ထားရမယ် မဟုတ်လား။
တရားနာခံ။ ။ ဆီမဖိတ်အောင် အင်မတန် လုံ့လဝိရိယစိုက်သွားရမှာပါဘုရား။
ဆရာတော်။ ။ သည်လို စိတ်က စိုက်ပြီး သွားတော့ အခုနက ကွေ့ရမယ့် နေရာကို စောစောက တင်ကြိုပြီး ကွေ့ဖို့ မသိဘူးလား။
တရားနာခံ။ ။ စောစောက တင်ကြိုပြီး သိပါတယ်ဘုရား။
ဆရာတော်။ ။ သိတော့ ဆီဖိတ်သေးသလား။
တရားနာခံ။ ။ ဆီမဖိတ်အောင် ထားတာလဲ စိတ်ပဲ။ လူတွေကို ဖယ်ရ ရှောင်ရ ကွေ့ရတာလဲ စိတ်ပဲ ဘုရား။
ဆရာတော်။ ။ သည်တော့ စိတ်က တပြိုင်နက်တည်း တစ်ခုလား နှစ်ခုလားဗျ။
တရားနာခံ။ ။ တစ်ခုပြီးမှ တစ်ခုပါဘုရား။
ဆရာတော်။ ။ အေး သို့သော်လဲ ဝိရိယထားသွားပြီဆိုတော့ စိတ်က အင်မတန် မြန်တယ်ဗျ။ စိတ်မြန်ပုံဟာ ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ လျှပ်တပြက်မှာကိုပဲ ကုဋေတစ်သိန်းဆိုတာ မှန်တယ်မဟုတ်လား။
တရားနာခံ။ ။ မှန်ပါတယ် ဘုရား။
ဆရာတော်။ ။ သည်တော့ ဒကာကြီးလဲ အလုပ်လုပ်ရင်း သည်လိုလုပ်ပါ။
တရားနာခံ။ ။ သည်လိုမှတ်ပြီး လုပ်ပါ့မယ်ဘုရား။
ဆရာတော်။ ။ အခုနလို ကြားထဲ လပ်သွားမှာလား။
တရားနာခံ။ ။ မလပ်ပါဘူး ဘုရား။
ဆရာတော်။ ။ အခုန ထားတယ်ဆိုတာက ဒကာကြီးက အဟုတ်ထားလျက်နဲ့ မဖြစ်တာလား။ မထားလို့လား။
တရားနာခံ။ ။ မထားလို့ ဆီဖိတ်တာပါဘုရား။
ဆရာတော်။ ။ အခုတော့ ထားလျက်သားနဲ့ မဖြစ်ဘူးလို့ ပြောတယ်။ အခုတော့ အဟုတ်ထားလို့ အဟုတ်သိပြီ မဟုတ်လား။
တရားနာခံ။ ။ နားလည်ပါပြီဘုရား။
ဆရာတော်။ ။ အဟုတ်သိတော့ အဟုတ်လုပ်ဖြစ်တယ် မဟုတ်လား။
ဆရာတော်။ ။ အခုန ဆီယူသွားရတာလို ဆီလဲ မဖိတ်ရအောင် စိတ်ကထားပြီး သွားရတယ်။ အသွားလဲ မပျက်ဘူး။ သည်နေရာကျတော့ ခြေလှမ်းကြဲကြဲ လှမ်းရဦးမယ်။ ဟိုနေရာကျတော့လဲ ကိုယ်လှမ်းချင်သလို လှမ်းလို့ မဖြစ်ဘူး။ ဟိုရှေ့ကို သိပ်လှမ်းလို့ မဖြစ်ဘူး။ သည်လောက်ကလေး လှမ်းမှာနဲ့ ပြီးတော့ ဟိုနေရာကျရင် ကွေ့ရဦးမယ်။ သည်နေရာကျတော့ ကျော်ရဦးမယ်နဲ့ စိတ်က သည်လိုထားပြီး သွားရတယ်မဟုတ်လား။ အဲဒါ ဘာလဲဆိုရင် စိတ်ကို အတင်းထားပြီး ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ဆီကိုလဲ မဖိတ်အောင်၊ လူတွေကိုလဲ ရှောင်လို့ လွတ်အောင် အတင်းထားတာဗျ။ အေး ... အခုလဲ ဘုရားဆိုဆုံးမတဲ့ဟာနဲ့ ဆီဟာ ဘယ်ဒင်းက အဖိုးထိုက်တန်သလဲဗျ။
တရားနာခံ။ ။ ဘုရား ဆိုဆုံးမတဲ့ဟာက အဆမတန် အဖိုးထိုက်တန်ပါတယ်ဘုရား။
ဆရာတော်။ ။ ဆီကို ယူသွားတဲ့အခါကျတော့ မဖိတ်စေနဲ့ ဘာနဲ့လို့ မှာရဦးမလား။ ကွေ့တန်ကွေ့၊ ကောက်တန်ကောက်၊ ကွင်းတန်ကွင်းလို့ မှာရဦးမလား။ ကွင်းပုံက ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလို့ သည်လို လျှောက်ပြောရမယ်ဆိုရင် ဘယ်လောက် ကြာကြာ မှာရမလဲ။
တရားနာခံ။ ။ အကြာကြီးပါဘုရား။
ဆရာတော်။ ။ စာအုပ်ရေးရင် ဘယ်လောက်ရေးရမလဲ။
တရားနာခံ။ ။ စာအုပ်ရေးရင် စက္ကူမလောက်ပါဘူးဘုရား။
ဆရာတော်။ ။ လျှောက်ဖတ်ရင်ကောဗျာ။
တရားနာခံ။ ။ တစ်နေ့လုံး တစ်ညလုံး ဖတ်လဲ အတော်ကြာကြာကြီး ဖတ်ရမှာပါဘုရား။
ဆရာတော်။ ။ ဟုတ်တယ်ဗျ။ သို့သော်လည်း စင်စစ်မှာတော့ ဘယ်လိုဟာတုန်းဆိုရင် ဒါဟာ ဆီမဖိတ်ဖို့ကလေးပါပဲဗျ။
တရားနာခံ။ ။ တင်ပါ့ဘုရား။
ဆရာတော်။ ။ အေး ဆီမဖိတ်အောင်ဟာ သည်လိုလဲ မပြောလိုက်ဘူး။ မပြောလိုက်ပေမယ့် မဖိတ်အောင် ယူရမှာမဟုတ်လား။
တရားနာခံ။ ။ မဖိတ်အောင် ယူရမှာပါဘုရား။
ဆရာတော်။ ။ အေး ဒကာကြီး ဒကာမကြီးတွေကိုလဲ အခု သတိပေးတယ်။ ဘုရားဆုံးမတဲ့ အဆုံးအမကို ရပြီး ဒါကို မလွတ်စေနဲ့။ တဆက်တည်းသာ ယူကြလို့ဆိုရင် ဒီက ပြီးလို့ အိမ်ပြန်တော့၊ အိမ်ရောက်အောင် တဆက်တည်း ပါရဲ့လား။
တရားနာခံ။ ။ မပါပါဘူးဘုရား။
ဆရာတော်။ ။ ဒါဖြင့် ဆီနှင့် ဘုရားဆုံးမတဲ့ အဆုံးအမဟာ ဘယ်ဒင်းက အဖိုးတန်သလဲဗျ။
တရားနာခံ။ ။ ဘုရားရှင်ဆုံးမတဲ့ အဆုံးအမဟာ အဆပေါင်း မရေမတွက်နိုင်အောင် သာလွန် အဖိုးထိုက်တန်ပါတယ်ဘုရား။
ဆရာတော်။ ။ ဆီကို မဖိတ်အောင် ဧရာမခွက်ကြီးနဲ့ ထည့်ပြီး ယူရင် ဘယ်လောက်ပါသလဲ။
တရားနာခံ။ ။ နှစ်ပိသာအပြင် တိုးမပါပါဘူးဘုရား။
ဆရာတော်။ ။ မဖိတ်အောင် ယူသွားရင် ဆီနှစ်ပိသာရဲ့ တန်ဖိုးဟာ ဘယ်လောက်ရှိမလဲ။
တရားနာခံ။ ။ သုံးကျပ် လေးကျပ်လောက် တန်ပါတယ်ဘုရား။
ဆရာတော်။ ။ ဒီသုံးကျပ် လေးကျပ်တန်ကို မဖိတ်အောင် ယူသွားလို့ မမှာဘဲနဲ့ မဖိတ်အောင် ယူမှာဗျ။ ဟုတ်ကဲ့လား။
တရားနာခံ။ ။ တင်ပါ့ဘုရား။ ဒါက လောဘကလေးနဲ့ကိုးဘုရား။
ဆရာတော်။ ။ ကဲ ဒါဖြင့် ဒါကို တဆက်တည်းပါအောင် ဆောင်ကြဆိုတော့ တဆက်တည်း ပါရဲ့လားဗျာ။
ဆရာတော်။ ။ ဘယ်ကျန်ရစ်ခဲ့သလဲ။
တရားနာခံ။ ။ ကားပေါ်အတက်မှာ ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်ဘုရား။ ကားပေါ်အတက်မှာ လူတွေက ကျိတ်ကျိတ်တိုးပြီးနေတော့ တပည့်တော်က မစ္ဆရိယစိတ်ကြီးနဲ့ နင်တို့ မတက်နဲ့အုန်း။ ငါဦးဆုံး တက်အုန်းမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ကြီးနဲ့ဆိုတော့ ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်ဘုရား။
ဆရာတော်။ ။ ဆီလိုယူရင် ဖိတ်ပါ့မလား။
တရားနာခံ။ ။ မဖိတ်ပါဘူးဘုရား။
ဆရာတော်။ ။ ဒါဖြင့် ဘုရားဟောတာနဲ့ ဆီနဲ့ ဘယ်ဟာက တန်ဖိုးရှိသလဲဗျ။
တရားနာခံ။ ။ ဘုရားဟောတာက အဆမတန် တန်ဖိုးရှိပါတယ်ဘုရား။
ဆရာတော်။ ။ အေး သည်လောက်သိရင် တော်ပါပြီ။ ဒါကတော့ မမှန်တတ်စရာ မလုပ်တတ်စရာ မရှိပါဘူးဗျ။ ဆီကတော့ ယူနေကျမဟုတ်လား။
တရားနာခံ။ ။ ယူနေကျပါဘုရား။
ဆရာတော်။ ။ ရေတွင်းထဲက ရေခပ်မယ်ဆိုရင် ရေခပ်တဲ့အခါမှာ မဖိတ်ရအောင် ယူရတယ်မဟုတ်လား။ သည်လိုယူတော့ မဖိတ်မယိုဘဲနဲ့ ဘယ်လောက်ထိအောင် ပါသလဲဗျ။
တရားနာခံ။ ။ မဖိတ်မယိုဘဲနဲ့ ကိုယ်လိုချင်တဲ့အထိ ရောက်အောင် ပါပါတယ်ဘုရား။
ဆရာတော်။ ။ မြတ်စွာဘုရားရဲ့ တရာတော်တော့ကော။
တရားနာခံ။ ။ မြတ်စွာဘုရားရဲ့ တရားတော်ကတော့ တယ် မကြာဘူးဘုရား။ အဟုတ်ကို မလိုချင်လို့ပါဘုရား။
ဆရာတော်။ ။ ဒါပေမယ့် ဆုတောင်းတော့ ဘယ်လိုတောင်းသလဲ။
တရားနာခံ။ ။ ဒါကတော့ အမေသင်ပေးတဲ့ သြကာသကို လျှောက်ဆိုတာပဲဘုရား။
ဆရာတော်။ ။ လိုတော့ မလိုချင်ဘူးလား။
တရားနာခံ။ ။ လိုတော့ လိုချင်ပါတယ်ဘုရား။ ဒါပေမယ့် နိဗ္ဗာန်ဆိုတာလဲ သေသေချာချာ မသိတော့ လိုချင်တယ်ဆိုတာလဲ ပါးစပ်ပြောပါဘုရား။
ဆရာတော်။ ။ ကဲ လိုချင်တာ မလိုချင်တာ နေပေ့စေ။ လိုချင်သည်ဖြစ်ဖြစ် မလိုချင်သည်ဖြစ်ဖြစ် ဒါလုပ်ဆိုရင် လုပ်သာလုပ်။ အဲသည်အတိုင်းဆိုရင် ရမှာပါပဲဗျ။ လိုချင်လဲ လုပ်၊ မလိုချင်လဲ လုပ်။ ကြားလား။
တရားနာခံ။ ။ မလိုချင်လို့ လုပ်ရင် ရလိမ့်မယ် မထင်ပါဘူးဘုရား။
ဆရာတော်။ ။ ဒါတွေကို စဉ်းစားမနေနဲ့။ အခုန လုပ်ဆိုတာသာ လုပ်ဗျာ။
၁၉၅၅ ခုနှစ် မေလ ၁၀ ရက်နေ့ည ၇-နာရီခွဲတွင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဓမ္မာရုံ၌ ဝေဘူဆရာတော်ဘုရားကြီး ဟောကြားတော်မူသော `သည်းခံလျှင် လိုသောဆု ပြည့်မည်´ တရားတော်မှ ကောက်နုတ်ချက်။
တရားနာခံအဖြစ် ဦးလှက ဆောင်ရွက်သည်။
Posted by LokaChantha at 10:34 PM
သောရေယျတ္ထေရ၊ သေခြင်းလေးမျိုးနှင့် ရှောင်လွှဲ၍ မရသော...
ကုသိုလ်စိတ်၏အကျိုး ဆွေမျိုးများက မပေးနိုင်
ABBA 2013 New Year Ceremony
နန္ဒဂေါပါလက၊ ရူပကုသိုလ်ကံအကျိုးပေးနှင့် လမ်းမှန်ရော...